कप्तान भएपछि ज्ञानेन्द्रले के भने ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
कप्तान भएपछि ज्ञानेन्द्रले के भने ?
१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बुधबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको कप्तानमा पारस खड्कालाई नियुक्त गर्‍यो । पारसले कप्तान पदबाट राजीनामा दिएसँगै क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानमा नियुक्त गरेको हो ।
यसअघि क्यानले पारसलाई नै कप्तानीमा फर्कन आग्रह गरेको थियो तर उनले आफू अब कप्तानीमा नफर्कने बताएका थिए । उनी नफर्कने भनेसँगै क्यानले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ज्ञानेन्द्रलाई दिएको हो । ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएसँगै उपकप्तानमा दिपेन्द्रसिंह ऐरी नियुक्त भएका छन् ।
कप्तान नियुक्त भएसँगै उनले विभिन्न समूहहरुसँग भेटघाट गरेका छन् । बिहीबार उनले जनस्तरबाट निर्माण गर्न लागिएको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको विषयमा छलफल भएको गरेका छन् । यससँगै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । धन्यवाद दिँदैगर्दा उनले पारसको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेका छन् ।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानी सम्हाल्नु ठूलो सम्मानको कुरा हो । पारसको कप्तानीमा टीमले एकदमै ठूलो फड्को मारेको थियो, पूरै टीमको लागि पनि त्यो ड्रिम गाइड हो । तपाईंको माया र साथको लागि धन्यवाद ।’
It is an honour to be taking over the captaincy of Nepali National Cricket team. Under the tremendous leadership of Paras, the team always tookabeatific flight and the whole team had that dream guide. Thankyou everyone for your love and support. pic.twitter.com/nFLn1r5ykx
— Gyanendra Malla (@gyanu_gm11) October 31, 2019
Previousकरौडौंको खालबाट समातिएका जुवाडेलाई सिडियो कार्यालयको यस्तो आदेश
Nextनेकपाका शीर्ष नेता ग्राण्डीमा, ओलीलाई भेटेपछि यसाे भने प्रचण्डले